ခုရက်ပိုင်း နေရတာ အရမ်းပျင်းဖို့ ကောင်းနေတယ်။ နေရမှာ ပျင်းနေရင် သေလိုက်လေ ပြောမယ်ဆိုရင် သေရမှာလည်း ပျင်းမိပါတယ်။ အလုပ်မှာလဲ ပျင်းဖို့ ကောင်းတယ်။ အလုပ်က ပြန်တော့လည်း ပျင်းလို့ဘယ်မှ မသွားချင်ဘူး။ စားဖို့ လည်း ပျင်းတယ်။ စကားပြောရမှာလည်း ပျင်းတယ်။ နားထောင်ရမှာလည်း ပျင်းတယ်။ အလုပ်ချိန်ပြီးတဲ့အခါ အိမ်တန်း ပြန်တယ်။ ကွန်ပြူတာရှေ့ ထိုင်ပြီး အင်တာနက်ပေါ်က သတင်းတွေလိုက်ဖတ်တော့လည်း ပျင်းတယ်။ သူများရေးထားတဲ့ စာတွေလိုက်ဖတ်တော့လည်း ပျင်းဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။ ကိုယ့်ဘာသာရေးဖို့ လည်း ပျင်းနေတယ်။ခေါက်ထားလိုက် ဆုံးမစကားတွေ နားထောင်ဖို့အတွက် ပျင်းခေါင်းကိုက်တဲ့ ဒဿနနဲ့ ဘ၀ကို ဖြုန်းတီးပစ်ဖို့ ပျင်းအလုပ်နဲ့ နဘန်းလုံးကြတဲ့ လောကကြီးကို ပျင်းနေဖို့ သေဖို့ပျင်း ငါ့မှာ ပျင်းရမှာကိုပျင်းအပေါ်ကစာတွေက ပုရွက်ဆိတ်လေးများအဖွဲ့ ရဲ့ ငပျင်း သီချင်းထဲက စာသားတွေ။ သီချင်းတင်မလို့ပျင်းလို့မတင်တော့ဘူး။ ဂါဖီးပုံကလည်း မထက်(RedRose) နေးတစ်ဖိုရမ်က သူရဲ့ ပရိုဖိုင် Signature မှာ တင်ထားတဲ့ပုံ။ ပျင်းလို့ပျင်းတယ်ဆိုတဲ့ ပုံကိုတောင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အင်တာနက်ပေါ်မှာ လိုက်မရှာပဲ သူများရှာထားတာကို လွယ်လွယ်ကူကူ ကူးလိုက်မိပါတယ်။ပျင်းတယ်ဆိုတာ မကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့် အခုရက်ပိုင်း တကယ့်ကြီးကို ပျင်းနေမိပါတယ်။ စိတ်တိုင်းမကျဘူး။ ဒီနေ့ သောကြာနေ့ ။ T.G.I.F ။ ဆက်ပျင်းနေလို့မဖြစ်ဘူး လို့ တွေးမိတယ်။ ဒီအတိုင်း ပျင်းယိတဲ့စိတ် ဆက်ပြီး ရှိနေမယ်ဆိုရင် .. စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက် ၂ရက် အဓိပ္ပါယ်မရှိပဲ ကုန်သွားလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် ပျင်းနေတဲ့ စိတ်လေးတွေ ပျောက်ပါစေ၊ တက်တက်ကြွကြွ လန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြစ်လာပါစေဆိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ပျင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို အခုလို ချရေးဖြစ်သွားတယ်။
1/30/2009 11:03:00 AM
ဟိုရက်က အသိတစ်ယောက်က သူ့ ရဲ့ ဂျီမေးကို တစ်ယောက်ယောက် ၀င်ကြည့်တယ်လို့သံသယရှိနေတယ်။ အဲလို သူမသိပဲ ၀င်လို့ ရလား၊ ဘယ်လို သိနိုင်မလဲလို့မေးလာတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်မ အရင်က တပိုင်းတစ်စ ရေးပြီး ရပ်ထားတဲ့ Gmail Security နဲ့ပတ်သတ်တာလေးကို အဆုံးသတ်အောင် ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။*************Check Last Activity**************Gmail မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အီးမေးကို ဘယ်နေရာက ၀င်အသုံးပြုခဲ့တယ်၊ ပြုနေတယ် (Last Login Activity ) ဆိုတာကို ကြည့်လို့ ရတယ် Feature တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှ ရှိသလဲ သိချင်တယ်ဆို Gmail Account ကို Login ၀င်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Gmail Page ရဲ့ အောက်ဆုံးကို သွားကြည့်ပါ။ ဒီလို မျိုးလေး တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ဒါ ကျွန်မ ရဲ့ ဂျီမေး။ ကျွန်မ အခုလို Login မ၀င်ခင်မှာ နောက်ဆုံး Login ၀င်ခဲ့တာ အခု အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပြူတာက ဖြစ်တာမို့Last Login Acticity မှာ အဲဒီလို ဖော်ပြနေတာပါ။ အသေးစိတ် ဘယ်နေရာတွေက ၀င်ရောက်အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကို သိချင်တယ်ဆိုရင် "Details" ဆိုတာလေးကို နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ Pop-Up Window ပေါ်လာပြီး ဒီအကောင့်ကို အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ကွန်ပြူတာတွေရဲ့ IP တွေနဲ့အချိန်တွေကို ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး ၀င်ခဲ့တဲ့ နေရာ (Activity) ၅ ခု ကို မှတ်ပေးထားတယ်။ IP တွေနဲ့အချိန်တွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်အသုံးပြုတာလား၊ တခြားတစ်ယောက် အသုံးပြုခဲ့တာလားဆိုတာ ခန့် မှန်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်က IP လည်းဆိုတာ သိချင်တယ်ဆို မှာ ရှာကြည့်လို့ ရပါတယ်။ကိုယ် Gmail ကို ၀င်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ခြားတစ်နေရာက လည်း ဒီအကောင့်ကိုပဲ ၀င်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအောက်က ပုံစံမျိုး ဖော်ပြနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် တခြားဘက်က Login ၀င်ထားတာကို ထွက်သွားအောင် လုပ်လို့ တဲ့ Feature မျိုး Gmail က ပေးထားတယ်။ အဲဒီ Feature ကို "Remote Sign Out" လို့ ခေါ်ကြတယ်။အပေါ်ကလိုပဲ Details ကိုတဲ့ နေရာကို နှိပ်ပါ။ ဒီတစ်ခါ ပေါ်လာတဲ့ Pop-up Window မှာ Concurrent Session Information ဆိုတာလေး အပိုပေါ်နေတာ တွေ့ ရမယ်။ တခြားနေရာ ဘယ် Browser, ဘယ် IP က ၀င်ထားတယ် ဆိုတာတွေ မြင်ရမယ်။ အဲဒီ အောက်မှာရှိတဲ့ "Sign out all other session" ဆိုတဲ့ နေရာမှာ နှိပ်လိုက်ရင် တခြားနေရာက Login ၀င်ထားတာတွေ အကုန်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီ Feature က အတော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့တခါတလေ တခြားသူရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ Gmail ၀င်သုံးပြီး ထွက်ဖို့ မေ့ခဲ့တာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ အဲဒီအခါတွေမှာ Gmail ကို login ၀င်ပြီး အပေါ်က ပြောထားသလို Sing Out လုပ်လိုက်မယ်ဆို အဲဒီထွက်ဖို့ မေ့ခဲ့တဲ့ နေရာတွေမှာ အကုန် Logout လုပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားမယ်။ ကိုယ်မဟုတ်ပဲ တခြားတစ်ယောက်က ကိုယ့် Password ကို တနည်းနည်းနဲ့ ရလို့သုံးနေတာမျိုး ဆိုရင်တော့ တခြား Session တွေကို Logout ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့် Gmail ရဲ့ Password ကို အသစ်ပြောင်းလိုက်ပါ။ Password ဆိုတာနဲ့Gmail Password အကြောင်းကို သိသလောက်လေး နည်းနည်း ဆက်ပြောပြအုံးမယ်။************* PASSWORD **************Gmail Password တစ်ခုကို Hack လုပ်ယူဖို့အရမ်း မလွယ်ပါဘူး။ မရဘူးလို့ မပြောဘူး။ နည်းတွေရှိချင်ရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် မလွယ်ဘူး။ (ကျွန်မတော့ မလုပ်တတ်ဘူး)။ Gmail Password တွေ အခိုးခံရတယ် ပြောတာမျိုးကြားဖူးတယ်။ ဘယ်လို ကိုယ့်ရဲ့ Password တွေကို တပါးသူတွေ ရသွားကြသလဲ။Password အခိုးခံရတဲ့ သူတွေကို ကြည့်ရင် ခိုးတဲ့ သူတွေက အကြောင်းသိနေတဲ့သူတွေ၊ ရင်းနှီးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တာများတာ တွေ့ ရပါတယ်။ အများဆုံး သုံးတဲ့ နည်းက Password ကို ခန့် မှန်း ထည့်ကြည့်တာနဲ့Forget Password ဆိုပြီး Password တောင်းတဲ့ နည်းဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေက အတော်လေးလွယ်တယ်လေ။ ပထမဆုံး အနေနဲ့ကိုယ့် အီးမေးရဲ့ Password ကို သူတပါး လွယ်လွယ်ကူကူ မှန်းလို့ ရတာမျိုး မထားမိဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုက ဂျီးမေး အကောင့်မှာ Secondary email ကို ထည့်ဖြစ်အောင် ထည့်ထားပါ။ Security Question ကိုလည်း လွယ်လွယ်ကူကူ မေးခွန်းမျိုး မထားပါနဲ့ ။ သင့်မွေးနေ့ က ဘာလဲ ဆိုတာမျိုး။ တခြားသူ မှန်းရလွယ်တာမျိုး မထည့် သင့်ပါဘူး။ Secondary Email လည်း ထည့်မထားဖူး၊ Security Question လည်း လွယ်လွယ်ကူကူ မေးခွန်းမျိုး ထည့်ထားမယ် ဆိုရင် တခြားသူတစ်ယောက်က Security Question ကို မှန်းဖြေကြည့်ပြီး Password ကို ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ Secondary Email သာထည့်ထားမယ်ဆိုရင် Forget Password လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ကိုယ်ထည့်ထားတဲ့ အီးမေးကို Password Rest လုပ်ဖို့ လင့်ပို့ ပေးမှာပါ။ ဒီအတွက် Secondary Email ကို မပျက်မကွက် ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။Security Question နဲ့Secondary Email ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် မှာ Gmail under Settings --> Accounts --> Change Security Question ဆိုတဲ့ နေရာမှ သွားပြီး ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီကတော့ Gmail ရဲ့ Pesonal Information - Direct Link ပါ။ဒီအပေါ်က ပုံက အင်တာနက်ကရှာထားတာ။ ဒီအပေါ်ကလို လွယ်လွယ်ကူကူ မေးခွန်းတွေ မထည့်ပါနဲ့ ။အခု ဒီပိုစ့်ရေးရင်း စမ်းကြည့်တာ Gmail က အရင်က ထက် ပိုပြီး Security ကောင်းလာ တွေ့ ရတယ်။ အရင်ကဆို Gmail မှာ "I cannot access my password" "I've forgot my password" လုပ်လိုက်ရင် Secondary Email မထည့်ထားရင် Security Question တန်းပေါ်လာတယ်။ အခု စမ်းကြည့်မှ Secondary Email ထည့်မထားတာရင် Security Question ကို နောက် ၅ ရက် နေမှ ထည့်လို့ ရမယ် လို့ တွေ့ ရတယ်။ ထည့်ထားပြီး အဲဒီ ထည့်ထားတဲ့ အီးမေးအကောင့် ၀င်မရလည်း နောက် ၅ ရက်နေမှပဲ Security Question ကို ဖြေခွင့်ပေးမယ်တဲ့။ ဒီတော့ Secondary Email က အရေးကြီးတယ်။ ထည့်ထားဖို့ လိုသလို၊ မေ့မသွားဖို့ လဲ လိုတယ်။တစုံတစ်ယောက် ကိုယ့်ရဲ့ အီးမေးကို Hack လုပ်သွားတယ်၊ လုံးဝ ၀င်မရတော့ရင် Google Accounts Help မှာ သွားပြီး အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်မမှာ အဲဒီလို အကူအညီတောင်းဖူးတဲ့ အတွေ့ အကြုံမရှိလို့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ရှင်းမပြနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။I can't access my accountနောက်တစ်နည်းကတော့ keylogger တွေ နဲ့Passwrod တွေ ခိုးယူကြတယ်။ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာထဲက ကိုယ်မသိအောင် keylogger တွေထည့်တယ်။ ဒီလို မဖြစ်အောင် ကိုယ်မသိတဲ့ file တွေ တပါးသူက ပို့ ပေးရင် အလွယ်တကူ လက်မခံပါနဲ့ ။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ AntiVirus Software တွေသွင်းထားပြီး ပုံမှန် Scan လုပ်ပါ။keylogger ထည့်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ သွားပြီး ကိုယ့်ဂျီးမေး ၀င်လိုက်တဲ့အခါ သူတို့ တွေ ကိုယ့်ရဲ့ Password ကို ရသွားနိုင်တယ်။ သူတပါးရဲ့ ကွန်ပြူတာမှ အရမ်း အရေးမကြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Personal Email တွေ မသုံးပါနဲ့ ။ အီးမေးအကောင့် အပိုထားပြီး အရေးကြီးတဲ့ ဒေတာ မရှိတဲ့ အကောင့်မျိုးကိုသာ အဲဒီလို ကွန်ပြူတာတွေမှာ သုံးပါ။ လိုအပ်လို့ မဖြစ်မနေ Personal Email ကို သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ Password အမှန်ကို တကြိမ်ထဲ ရိုက်မထည့်ပဲ ထည့်လိုက်ဖျက်လိုက် အကြိမ်များများလုပ်ပြီးမှ Password အမှန်ကို ထည့်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ Password ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မှတ်မထားနိုင်အောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Password ကို ပြောင်းပြစ်ပါ။နောက်တစ်ခုက keylogger မဟုတ်ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း Browser တွေမှာ User Name နဲ့Password တွေကို သိမ်းထားပေးတဲ့ Feature တွေရှိနေတယ်။ အီးမေးဝင်လိုက်ရင် အဲဒီ User Name နဲ့Password ကို သိမ်းမလားဆိုပြီး မေးတယ်။ အဲလိုအချိန်မှာ "NO" ကိုနှိပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ။ YES သွားနိုပ်ရင်တော့ ကိုယ့် Information တွေ အဲဒီ Browser မှာ သိမ်းထားပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။ Browser တွေမှာ Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ Message တွေကို အသေအချာဖတ်ပါ။ ဘာမှ မဖတ်ပဲ YES နှိပ်တဲ့ အကျင့်ကို မလုပ်ပါနဲ့ ။နောက်တစ်ခုက အီးမေးဝင်တဲ့အခါ ကို မှတ်ထားမလား "Remember me on this computer" ဆိုတာကို Uncheck လုပ်ပြီးမှာ ၀င်ပါ။ မဟုတ်ရင် အဲဒီ Broswer ကိုသုံလို့ကိုယ့်ရဲ့ အီးမေးကို အလွယ်တကူ ၀င်လို့ ရနေမယ်။************* Use HTTPS **************နောက်တစ်ခုကတော့ Internet Cafe တို့ လို Public Computer တွေ အသုံးပြုသူတွေ ပြုလုပ်ထားသင့်တဲ့ အချက်ပါ။ Secur Http (https) ကိုအသုံးပြုပြီး Gmail ကို Access လုပ်ဖို့ ပါ။ Gmail ကို သာမန် http:// နဲ့အသုံးမပြုပဲ https:// နဲ့အသုံးပြုတာပါ။ အဲဒီလို အသုံးပြုတဲ့အတွက် ဘာတွေကောင်းလည်းဆို အလွယ်ဆုံး နားလည်အောင်ပြောရရင် ကြားထဲကနေ ဖောက်ပြီး ဖတ်လို့ မရအောင် လို့သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာ Browser ကနေ အင်တာနက်ပေါ် အထွက်မှာ ကြားထဲကနေ တစ်ခုခုခံပြီး ဖတ်လို့ မရအောင်လို့ ပါ။ဟိုးအရင် အရင်ကတည်းက Google က https ကို support လုပ်ပါတယ်။ Gmail ကို https နဲ့သုံးချင်တယ်ဆို http://mail.google.com အစား https://mail.google.com လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး သုံးလို့ ရခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ နှစ်လည်ပိုင်း ကစပြီး Gmail က Feature တစ်ခု ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ် Gmail ကို သုံးတိုင်း Http အစား https နဲ့ ပဲ အမြဲအသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့ Setting ပါ။Gmail Setting ကိုသွားပြီး Browser connection: မှာ "always use https" ကို ပြောင်းထားလိုက်လို့ ရပါတယ်။ဒီအထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေ က Google's Gmail ရဲ့ Securityနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မ သတိထားမိတဲ့ အချက်တွေပါ။ အိုင်တီနယ်က လူအတော် များများကတော့ သိပြီးသားဖြစ်ပါ လိမ်မယ်။ မသိသေးတဲ့ သူတွေ သိသွားအောင်၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေလိုက်လုပ်နိုင်အောင်၊ ကိုယ့် ရဲ့ အီးမေးကို တပါးသူတွေ ၀င်ကြည့်နေသလား၊ ၀င်လို့ ရနေသလား စိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေ စမ်းကြည့်လို့ ရဖို့အတွက် သိသလောက်လေးကို ရှင်းပြထားခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ရေးသားထားတာတွေမှ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။* * *တစ်လက်စတည်း Password နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးတယ် ထင်တာ တစ်ခုကို ပြောလိုက်အုံးမယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိသမျှ Email Accounts တွေ အကုန်လုံးမှာ Password တစ်ခုတည်းကို သုံးတာမျိုး လုံးဝ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ Account တစ်ခုရဲ့ Password တစ်ခုရသွားရင် တခြား Account တွေပါ ပါသွားနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး Password တစ်ခုတည်းကိုပဲ အကြာကြီး သုံးတာမျိုးလဲ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ Password တွေကို မကြာခဏ ပြောင်းပြီး သုံးသင့်ပါတယ်။ မှတ်မိအောင်လည်း ပြောင်းအုံးပေါ့။ တော်ကြာ ပြောင်းပြီး ကိုယ့် Password ကိုယ်မေ့သွားလို့ဒုက္ခရောက်နေမယ်။ Password ထားတဲ့အခါမှာလည်း ခပ်ရှည်ရှည်နဲ့စာလုံးအကြီး အသေးတွေ၊ နံပါတ်တွေ ရောသုံးပါ။ ခွင့်ပြုတယ်ဆို Special Characters တွေ ပါရောပြီး သုံးသင့်တယ်။Personal Emails တွေရဲ့ Password တွေကို တခြားနေရာတွေမှာ မသုံးမိပါစေနဲ့ ။ ဥပမာ ပြောရရင် Forum တွေ၊ Website တွေမှာ Account ဆောက်တဲ့ အခါတွေမှာ ကိုယ့် အီးမေးရဲ့ password တူတွေ မသုံးပါနဲ့ ။ နေရာတိုင်းကိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး။ တချို့ နေရာတွေမှာ User Name နဲ့Password ကို Database မှာ သိမ်းတဲ့အခါ encrypt လုပ်မသိမ်းထားဘူးဆိုရင် အဲဒီ Site က Admin တွေ အလွယ်တကူ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ သတိဆိုတာ ပိုတယ် မရှိပါဘူး။* * *Useful Links:Google's Password AssistanceGoogle Accounts Help -I can't access my account
နားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်။ ဒီသီချင်းကို နားထောင်လိုက်တိုင်း...စိတ်ညစ်လို့အရက်သောက်တာပါ...အသည်းကွဲလို့အရက်သောက်တာပါ...ဆိုတဲ့ အပြောတွေနဲ့အရက်ကို သိက္ခာကျအောင် မလုပ်ပါနဲ့ ...အရက်ကို ကြိုက်လို့ သာ သောက်စမ်းပါ..ငါတို့ ကတော့ အရက်ကို ကြိုက်လို့ ပဲ သောက်တယ်ဟု... အမြဲပြောလေ့ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို.. သတိရမိတယ်....စိတ်ညစ်တဲ့အမူးသမားတေးရေး - မောင်စစ်ငြိမ်းတေးဆို - စိန်ဝင်းထွန်းအရက်ကိုကြိုက်လို့ သောက်တဲ့သူစိတ်ပျော်တတ်လို့သောက်တဲ့သူစိတ်ညစ်တဲ့ အမူးသမား..ညနေစောင်းတော့ ပြောင်းလဲပြီစိတ်ဆန္ဒကတောင်းသည်သောက်ပြစ်လိုက်မယ် အရက်များများ......နေပါစေပြစ်တိုင်းပဲကြွေပါစေအသည်းလေးငိုမယ်လေရှိုက်ပြီးဆွေးသိုင်းကွက်နင်းပြီး လျှောက်လို့ သာသွား..ကမ္ဘာမှာတစ်ယောက်တည်းပဲကြင်နာသူခုန်ပြေးသွား..ရင်ခွင်မှာနာကျည်းသော..ဆွေးရိပ်များက ဖုံးလွှမ်းနေသလား......မူးလာတိုင်းလည်းမလဲပါရှေ့ မှာဆူးခင်းလမ်းကမာနင်းပစ်လိုက်မယ်ခပ်ကြမ်းကြမ်းအရက်ခွက်ထဲကို အရက်ထည့်ကာဖိတ်စင်ပြီးလဲမသွားပါ..သောက်ပြစ်လိုက်မယ် အရက်များများ........အရက်သောက်တာကို အားပေးသလားဆို အားမပေးပါဘူး... ဘယ်အရာမဆို တန်ဆေးလွန်ဘေးတဲ့.. ကိုယ့်ကျန်းမာရေး၊ လူမှု့ ရေး၊ စီးပွါးရေး.. ထိခိုင်မှု့ မရှိအောင်... အခြေအနေ၊ အချိန်အခါ၊ နေရာဒေသကို လိုက်ပြီး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သောက်နိုင်ကြပါစေ................ဒါနဲ့ပျင်းနေတယ်ဆို Burmese classic မှာတင်ထားတဲ့ စိန်ဝင်ထွန်း ရဲ့ လောကကြီးက အေးဆေးပဲ ဆိုတဲ့ အခွေကိုကြည့်လိုက်။။ အပျင်းပြေသွားမယ်။ သီချင်းဆိုပုံတွေက ရေရေလည်လည် မိုက်တယ်။ ကြည့်ပြီး သဘောကျ သွားတယ်။ YouTube မှာ လည်း နာမည်ရိုက်ထည့် ရှာကြည့် နိုင်ပါတယ်။စိတ်ညစ်တာတွေ မတွေးနဲ့ .. လောကကြီးက အေးဆေးပဲ... (တေးရေး -မောင်မောင်ဇော်လတ်)
၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက် ပထမဆုံး ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့သံလွင်အိပ်မက်အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်းသံလွင်အိပ်မက် အတွဲ (၃) အမှတ်(၁)
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ..Happy New Year to all my Chinese friends!!မနက်ဖြန် ဆို တရုတ်နှစ်ကူးလေ။ ဒီမှာ ကြားနေရတာတွေ၊ မြင်နေရတွေကြောင့် နောက်လာမယ့် နှစ်က နွားနှစ်ဆိုတာ သိထားတယ်။ နွားနှစ်ဆိုတော့ ဘာဖြစ်လဲ... ။ မသိဘူး။ ကျွန်မက တရုတ်လူမျိုးမှ မဟုတ်တာ။တရုတ်နှစ်ကူးနဲ့ပတ်သက်တာ ..... ဘာတွေ ထပ်သိလဲဆို ဒီနှစ် တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ အလုပ်နှစ်ရက်ပိတ်တာ သိတယ်။ အဲဒီနှစ်ရက်မှာ ဆိုင်တွေ ပိတ်တာလည်း သိတယ်။ အဲဒီလို ပိတ်တဲ့ အတွက် အပြင်မှာသာ ၀ယ်စားလေ့ရှိတဲ့ ကျွန်မလို လူတွေအတွက် အခက်အခဲရှိတယ် ဆိုတာလည်း သိတယ်။ ဒီလိုတွေ သိတဲ့ အတွက် ဒီနေ့ဈေးနည်းနည်း ၀ယ်တယ်။ ၀ယ်သာ ၀ယ်တာ၊ သိပ်တော့ မထူးပါဘူး။ ချက်စားလို့ ရတာတွေ ၀ယ်တာမှ မဟုတ်တာ။ ဘာမှ စားဖို့ မရှိတာထက်စာရင် စားလို့ ရတာလေးတွေရှိတော့ နည်းနည်း အဆင်ပြေသေးတာပေါ့လို့တွေးမိတာနဲ့စားချင်တာတွေ ၀ယ်လာ ခဲ့တယ်။ အဖော်လိုက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းကလည်း မြှောက်ပေးတယ်။ ဘာဝယ်ရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတော့ စားချင်တာသာဝယ်တဲ့။ ၀ယ်ပြီး ပိုက်ဆံရှင်းခါနီးမှ နင်ဒါတွေစားပြီး နောက်ရက်တွေ အလုပ်မသွားနိုင် ဆေးခွင့်ယူနေရမယ်တဲ့။ ထည့်နေတုန်းကတော့ မတားဘူး။ မတတ်နိုင်ဘူး ၀ယ်ဖို့ စိတ်ကူးပြီးမှတော့ ၀ယ်မှာပဲဆိုပြီး ၀ယ်လာခဲ့တယ်။ဘာတွေလည်းဆိုတာ မြင်ရမယ် ထင်တယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း နွားနို့ တစ်ဗူး ပါတာ တွေ့ တယ် မဟုတ်လား။ နွားနှစ်မို့နွားနို့ သောက်မှ ဆိုပြီး ၀ယ်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ မနေ့ က အိမ်နဲ့ဖုန်းပြောဖြစ်တယ်။ နွားနို့ သောက်ဖြစ်လား အမေက မေးတယ်။ အဲဒီလို မမေးတာ အတော်လေးကြာပြီ။ မမေးထဲက မသောက်ပဲနေတာ။ ညာတာလည်း မဖြစ်အောင်၊ အမေလည်း စိတ်ချမ်းသာအောင် မရှိဘူး၊ ဈေးသွားဖြစ်ရင် ၀ယ်သောက်မယ် ပြောမိခဲ့တဲ့ အတွက် ဒီနေ့နွားနို့ တစ်ဗူး ၀ယ်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်လာမယ့် နှစ်ရက် အပေါ်က ပုံထဲကဟာတွေစားပြီး အိမ် မှာနေဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က တရုတ်နှစ်ကူး နဲ့ ကွာပါ့လို့စိတ်ထဲက တွေးနေတယ်။ အင်း ... စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းက ထမင်းဟင်းချက်ကျွေးမယ် ဆိုရင်တော့ သူတို့ အိမ်မှာ ထမင်း သွားစားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ဖတ်ပြီး သဘောကျသွားတဲ့ ဂါဖီး ကာတွန်း...Garfield by Jim Davis
1/23/2009 10:10:00 AM
အခုနလေးတင်မှ အလုပ်ရောက်တယ်...ဒီနေ့မနက်ပိုင်း ခွင့်ယူထားတာ... အခု အိပ်ချင်နေတယ်...ညက အိပ်ရေး မ၀ဘူး... နေ့ တစ်ဝက် အလုပ်လုပ်ရအုံးမယ်...လုပ်စရာတော့ သိပ်မရှိဘူး... ညနေ ၆ နာရီဆို ပြန်မယ်......အဖေလာတယ်... ပစ္စည်းတွေ ပေးလိုက်တယ်...သဘောကျတယ် ပြောတယ်... အခုတော့ပြန်သွားပြီ...နောက်ထပ်ရောက်အုံးမယ်တဲ့... ကျေးဇူးတွေတင်လို့ ...မုန့် ဖိုးပေးသွားတယ်... အခု ၃ နာရီ ထိုးပြီ......ဗိုက်ဆာလာတယ်... စိတ်တိုသွားတာကို...ညစာမှ ပေါင်းစားမယ်... ပြန်မအိပ်လိုက်ရဘူး...အချိန်တော့ရခဲ့တယ်... ဒီလို ပါပဲ..ဖြစ်တတ်ပါတယ်.. မကြာခင် ၄ နာရီ ထိုးမှာပါ....သနားနေတာတဲ့လေ... တခြားတစ်ဖက်မှာ ကောင်းပါတယ်..နေသားကျနေပြီပေါ့တဲ့... အပြောအရမ်းကောင်းသွားလား..ဒါလူ့ ဘ၀တဲ့... မသေမခြင်းပေါ့...၅ နာရီ ရှိနေပြီ...............၆ နာရီ .. အိမ်ပြန်ပြီ..( အခုမှ ညနေ ၃ နာရီကျော် ၄ နာရီ မထိုးသေးတဲ့ အတွက် .. ၅ နာရီ နဲ့၆ နာရီကို ဆက်ရေးလို့ မရသေးဘူး.. လုပ်စရာရှိတာလေးတွေ လုပ်အုံးမှ...)... ဒီနေ့ ...၂၂ ၀၁.. ကိုယ်မမေ့ပါဘူး..ချမ်းမြေ့ပါစေ.. အဆင်ပြေပါစေ..သူငယ်ချင်းရဲ့ မာတာမိခင် ကျန်းမာပါစေ.....
1/22/2009 03:04:00 PM
ဒီနေ့မနက် အိပ်ရာ ထထခြင်းလုပ်တဲ့ အလုပ်က ၄၄ ကြိမ်မြောက် အမေရိကန်သမ္မတခံယူပွဲမှာ အိုဘားမား ပြောတဲ့ မိန့် ခွန်းတွေကို လိုက်ရှာဖတ်ခြင်းပါပဲ။ အိုဘားမား စကားပြောတာကို ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ အဖြေကိုသိပြီး ပထမဆုံး ချီကာဂိုမှာ ပြောတဲ့ မိန့် ခွန်း နားထောင်ပြီးကတည်းက အတော်လေး ကြိုက်တယ်။ မိန့် ခွန်း စာသားတွေ ဖတ်ပြီးမှ အသံဖိုင်ကို လိုက်ရှာ နားထောင် ဖြစ်တယ်။Barack Obama's inaugural address - Jan. 20, 2009 ပြီးတော့ သတင်းတွေ အရ အိုဘားမား ကျမ်းကျိမ်တဲ့ အချိန်မှာ လွဲချော်မှု့ လေးတွေ ရှိတယ်ဆိုလား ဖတ်လိုက်ရလို့အဲဒါလေးကို လိုက်ရှာကြည့်ဖြစ်တယ်။ တစ်ဆက်တည်း ပြောအပြီး မှာ ရွက်တဲ့ ကဗျာကိုလည်း လိုက်ရှာဖတ်ဖြစ်တယ်။ ကဗျာရွက်သံကိုလည်း နားထောင်ဖြစ်တယ်။Praise Song For The Day by Elizabeth Alexanderမနက်က အဲဒါတွေ လိုက်ရှာ အဖတ်ကောင်းတာနဲ့အလုပ်ကို ၁၀ မိနစ်ကျော်လောက် နောက်ကျပြီးမှ ရောက်တယ်။ အလုပ်ရောက်တော့ အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့သတင်းတွေ ဆက်ပြီး မဖတ်ဖြစ်တော့ပဲ နေ့ လယ်စာ စားချိန်ကြမှာသာ ဒီသီချင်းလေး ရတာနဲ့နားထောင်ဖြစ်တယ်။ R.Kelly -I Believe (Obama Tribute)I believeI believeI believeOHI believeI believeI believeOH OH IWhen the mountain seems too highAnd you don't have the courage nor the strength to climbInaroad you all 'lone inBut still you run though you can not see the finish lineAnd dark cloud are over youYour sky's no longer blueBut you marched on straight aheadAnd somehow you made it threwGot to the mountainAnd lead the path for meYour victory made history and now I believeI believeI believeI believeOHI believeI believeI believeOH OH IWhen it felt like you and we couldn't fight no moreOn the ropes and it seemed like you was gonna' run out of breathWhen the world was on your shouldersAnd the walls were in your wayYou leadily made it overThrew it all you kept the faithWith the hope you set us freeYou showed us how to dreamAnd now we can lift our voices and forever seeNow's the time to look aheadAnd think of the heroes of the pastTo celebrate this victoryLets raise the flag cause I believeI believeI believeI believeOHI believeI believeI believeOH OH IAnd when they tried to keep you downYou kept up your headNever lose insideYou believed in what was rightYou endured to the endWalked threw the strongest windAnd when our hope was dyingYou brought us healingAnd now I got somethingTo tell my children I believeပြီးတော့ အဲဒီနေ့ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ လိုက်ဖတ်ဖြစ်ပြန်တယ်။ သူတို့ နိုင်ငံမှာ လူအများစုဟာ အရမ်း ပျော်နေကြတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု့ တွေ လုပ်ပေးနိုင်မယ့်သူဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့အိုဘားမားကို သူနိုင်ငံသူ/ နိုင်ငံသားတွေသာမက လူအများက နှစ်သက်ကြတယ်။ ကြိုဆိုကြတယ်။ သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရမှု့ အတွက် ၀မ်းမြောက်ကြတယ်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း အိုဘားမားက အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး လူမည်း သမ္မတ။ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လူအများ ထင်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခု သူတို့ နိုင်ငံမှာ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီလေ။ ကျွန်မ တို့ ရဲ့ ပျော်ရမယ့်နေ့ .. ကျွန်မတို့ ရဲ့ အိပ်မက်ရော ဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲ.. ဆိုတာ... တွေးရင်း ...Related Post : Martin Luther King, Jr.'s "I HaveaDream" Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေ ရအောင် ရိုက်တယ်ဆိုတာ အရမ်း လွယ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဈေးကြီးကြီး နဲ့functions တွေ အများကြီးပါတဲ့ Camera နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုယုံ တစ်ချက်တည်းနဲ့့ ပုံကောင်းကောင်းတွေ မရနိုင်ပါဘူး။ အလင်းအမှောင်၊ ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို သိရှိယုံ မကဘူး၊ ရသ၊ အလှအပတွေကိုလည်း မြင်တတ် ခံစားတတ်ရအုံးမယ်။ (တခြား အချက်တွေ ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။)နောက်ထပ် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်က ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှက်နေတာ၊ ကြောက်နေတာမျိုး လုံးဝ မရှိရဘူး ဆိုတဲ့ အခက်ပါပဲ။ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ပုံကောင်းကောင်းတွေရဖို့ ကသာ အဓိက ဆိုတဲ့ စိတ်ဖြစ်နေရမယ်။ မရှက်မကြောက် လမ်းမပေါ်၊ လူတွေအကြားမှ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ ရအောင် ကြိုးစားနေတဲ့ ဓာတ်ပုံ ဆရာတစ်ဦးကို အမှတ်မထင် တွေ့ ခဲ့လို့ မှတ်တမ်း တင်ထားလိုက်ပါတယ်။ဟိုတစ်နေ့ က ညနေပိုင်း အလုပ်ကအပြန် လမ်းလျှောက်လာရင်း အထက်ကရှု့ ခင်းတွေကို တွေ့ လိုက်ရတာပါ။ လမ်းလျှောက်လာရင်း ဖုန်းအမြန် ထုတ်ပြီး၊ မသိမသာ ခိုးရိုက်လိုက်ရတာ ဆိုတော့ အရမ်းတော့ မရှင်းလင်းဘူး။ ကျွန်မ နည်းနည်းလည်း ရှက်တတ်တော့ ပေါ်တင်ကြီး မရိုက်ရဲဘူးလေ။ မသိမသာလေးရိုက်ရတာ။ အပြောခံရမှာလဲ နည်းနည်း ကြောက်တယ်။ အပေါ်က ဓာတ်ပုံဆရာလို ရိုက်ဖို့ ဆိုတာ စိတ်ကူးလို့ တောင် မရဘူး။ ဒါကြာင့်လည်း ကျွန်မ ဓာတ်ပုံပညာကို စိတ်ဝင်စားသူလို့ တောင် နာမည်တတ်မရတာဖြစ်မယ်။ အဲဒီနေ့ က သုံးပုံပဲ ရိုက်လို့မှီလိုက်တယ်။ လက်နည်းနည်း နှေးသွားလို့ နောက်ဆုံး လိုချင်တဲ့ အကွက်တစ်ကွက် မရိုက်လိုက်နိုင်ဘူး။ ဖုန်းဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း နည်းနည်းနှေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မသာ လက်မြန်မယ်ဆို အဲဒီအကွက်လေး ရိုက်လို့ ရနိုင် လောက်တယ်။ တစ်ညနေလုံး ရိုက်ယူ မထားလိုက်နိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းလေး အကြောင်းတွေပြီး စိတ်မကောင်းဘူး။ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ အခါ လက်သွက်ရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဒီတစ်သက် မေ့နိုင်တော့မယ် မထင်ဘူး။
မှန်ချပ်တွေပါ။ အိမ်ခန်းတွေမှာ အလှဆင်ဖို့အသုံးပြုကြတယ် ထင်တာပဲ။ ဘောင်ခပ်လိုက်တော့ တမျိုး ကြည့်ကောင်း သွားတယ်။Got those Mirrors from target.com
အခုရက်ပိုင်း Apple က ထုတ်တဲ့ Mac laptop တွေကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတာနဲ့အချိန်ရရင် ရသလို ဆိုင်တွေမှာ လိုက်ကြည့်ဖြစ်နေတယ်။ ဘာတွေ ဘယ်ဈေးပေါက်တယ် ဆိုတာတွေ နဲ့တခြားအချက်အလက်တွေကိုလည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာပါ သတိထားပြီး လိုက်ဖတ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒါတောင် ဟိုရက်က အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့၁၄ ရက်နေ့ တုန်းက SG နဲ့Malaysia အတွက် Apple Online Promotion ရှိတာကို မသိလိုက်ဘူး။မနေ့ ညနေပိုင်းကလည်း ထုံးစံအတိုင်း ကွန်ပြူတာ ပစ္စည်းတွေ လျှောက်ကြည့်ဖို့ သွားရင်း Apple's Promotions တွေ ရှိနေကြောင်း တွေ့ ခဲ့ရတယ်။ Apple(Mac) Computers အမျိုးအစား ပေါ်လိုက်ပြီး Printer နဲ့(Apple Care Protection Plan + 4GB Ram) တွေထပ်ဆောင်းဝယ်မယ်ဆို လျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းပေးတာမျိုးပါ။ မူရင်း ဈေးကို လျှော့ပေးမျိုး၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်း အပို ပေးတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တဆက်တည်း Apple Sofrwares တွေပါ ၀ယ်မယ် ဆိုရင် 15% / 30% ဈေးလျှော့ပေးမယ် သိရပါတယ်။မနေ့ က ဆိုင်မှာ တွေ့ ရတဲ့ Promotions ကြော်ငြာဒီအောက်က Promortion က အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှာတွေ့ တာဒါတွေက ဟိုတစ်ရက်က လျှောက်ကြည့်ရင်း ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ။ တချို့ ဆိုင်တွေမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် မရိုက်ဖို့ လာတားပေမယ့် အဲဒီမှာတော့ တားတာမတွေ့ ရဘူး။ တခြားသူတွေ ဟိုရိုက်ဒီရိုက်လုပ်နေတာတွေ့ တာနဲ့ကိုယ်လည်း အားကျမခံ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားလိုက်တယ်။ခုရက်ပိုင်း ဆိုင်တွေမှာ ဈေးတွေ လိုက်စုံစမ်းကြည့်၊ မေးကြည့်တဲ့ အခါ Apple ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းတဲ့ ဈေးတွေက အွန်လိုင်းဈေးတွေနဲ့တူတူပဲ၊ ထူးပြီး ဈေးလျှော့နေတာမျိုး မရှိဘူး ဆိုတာသိရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်ကိုလိုက်ပြီး တခြား အပိုပစ္စည်းတွေကို လက်ဆောင်ပေးတာတို့ ၊ တခြားပစ္စည်းတွေကို ဈေးလျှော့ပေးတာတွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေကတော့ ၀ယ်မယ်ဆိုပြီး သေချာမေးမှ သိရတယ်။ ဈေးတွေလိုက်မေး၊ ဈေးဝယ်ရတာ စိတ်မရှည်ဘူး။ ခုတော့ နည်းနည်းတိုးတတ်လာပြီ။
1/18/2009 02:10:00 PM
မေတ္တာရေစုန်မျောခဲ့သူ ငုံချိန်ကိုမှီခဲ့သလို .. ကြွေချိန်ကိုမှီခဲ့ပြီ ...အိုဘယ့် မနှင်းဆီရယ်..အရောင်ပြယ်ပြီး အနံ့ လေး ကွယ်ကာပျောက်သွားလည်း ဆူးဒဏ်က နာကောင်းတုန်းပဲ ..ရင်မှာ ပေါက်ဖွားစ မလည်မ၀ယ် အချစ်ကလေးနဲ့ဘ၀ဒုက္ခ မမြင့်တမြင်အရွယ်လာချင်ရင်လွယ်ပြီး... ပြန်ချင်တော့ခက်တဲ့... မေတ္တာရေစုန်မျောခဲ့တယ်...ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ကိုယ်ထင်တာကိုယ်လုပ်မယ်အိုဘယ့် မနှင်းဆီရယ်...နင်ကပဲ လှသလား ငါကပဲ အသလား.. အခုတိုင်အောင် အဖြေမရှိသေးတယ်..ရင်မှာလေဟုန်းကနဲ အရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်တဲ့ ကောက်ရိုးမီးချစ်သူနဲ့ ..ပျော်ရင် အရယ်လွယ်ပြီး ငိုရင် အရှိုက်ခက်တဲ့ ... မေတ္တာရေစုန်မျောခဲ့တယ်..တခါတလေ ကိုယ်အသာရဖို့ဘယ်နှစ်ခါ အနာခံရမလဲ ...အိုဘယ့် မနှင်းဆီရယ်...နွေနေ့ ခင်း လမင်းသာနိုင်တဲ့ အခြင်းအရာ မချစ်ရင် ညာလို့ မရဘူးကွယ်မကြုံလို့မသိသေးတဲ့... မမြင်လို့မကြောက်တတ်တဲ့ မျက်ကန်းနဲ့ချစ်တစ္ဆေနဲ့ ..ယူချိန်မှာလွယ်ပြီ်း... လျော်ချိန်ကျခက်တဲ့... မေတ္တာရေစုန်မျောခဲ့တယ်..
ဟိုတလောက စားဖြစ်တဲ့ ဒန်ပေါက်။ ရနံ့ သစ်မှာ စားတာ။ အဲဒီက ဒန်ပေါက် မဆိုးဘူး။ စားလို့အဆင်ပြေတယ်။ အထဲမှာပါတဲ့ ကြက်သားလည်း စားလို့ ကောင်တယ်။ ဘာလချောင်ကြော်လည်း ပေးတယ်။ အတူသွားစားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ကြိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုပဲ ပြောစရာရှိတာက ကျွန်မ ပါးစပ်ထဲ နည်းနည်းလေး လေးတယ် (ငံတယ်) လို့ ခံစားရတယ်။ တခြားသူတွေက အနေတော်ပါပဲလို့ တော့ ပြောတာပဲ။ ။ ကျွန်မက အငံ မစားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း မြန်မာ ဒန်ပေါက်စားချင်တယ်ဆို ရနံ့ သစ်ကို ပထမ ဦးစားပေးအနေနဲ့ သွားဖြစ်တယ်။အထဲမှာ ကြက်သား ၀ှက်ထားတယ်Oriental House မှ ဒန်ပေါက်။ တစ်ခါသွားစားဖူးတယ်။ ထည့်ပေးတာ များတော့ များတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒန်ပေါက် ထမင်းက ပွတတဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်မ မကြိုက်ပါ။ ဆန်မကောင်းလို့ထင်ပါတယ်။ အထဲမှာပါတဲ့ ကြက်သားလည်း စားလို့သိပ် မကောင်းဘူး။ အဲဒီနေ့ က ဗိုက်အတော်ဆာနေလို့Coke ဗူးတစ်ခွက် အကူအညီယူပြီး စားတာတောင် သုံးပုံတစ်ပုံ မကုန်ခဲ့ဘူး။ ကြက်သားလည်း နှမြောလို့ စားဖို့ ကြိုးစားတာ စားလို့ မရ။ အဲဒီဆိုင်က ဒန်ပေါက် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာ ပိုက်ဆံပေးပြီး ၀ယ်စားရမယ်ဆိုရင် လုံးဝ ထပ်စားဖြစ်တော့မယ် မထင်။အင်းလေးက ဒန်ပေါက်။ သူ့ ရဲ့ ဒန်ပေါက်က အရောင်စုံပဲ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ခါသွားစားတာ၊ နည်းနည်းတော့ကြာပြီ။ ဓာတ်ပုံ မရိုက်ထားမိဘူး။ မှတ်မိသလောက် အစိမ်းရောင်တွေ လည်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဒန်ပေါက်နဲ့ သိပ်မတူဘူး။ ဒီက ဒန်ပေါက်တွေလိုပဲ ဘာတွေမှန်းမသိတဲ့ ( ကျွန်မ မခံနိုင်တဲ့ အနံ ရှိတဲ့) အစေ့တွေ အများကြီး ထည့်ထားလို့ ဖယ်စားနေရတာ အလုပ်အတော် ရှုပ်တယ်။ ဒန်ပေါက်နဲ့ အတူထည့်ပေးတဲ့ ကြက်သားကလည်း မြန်မာဒန်ပေါက်ဆိုင်တွေက ကြက်သားဟင်းနဲ့ မတူပဲ ဒီက ကြက်သားကြော်တွေနဲ့ပိုတူတယ်။ အဲလောက်ကြီး မကြိုက်ပေမယ့် ဒန်ပေါက်စားချင်နေတဲ့ အချိန်၊ ထပ်ဝယ်စားမိနိုင်တယ်။မြနန္ဒာ ဆိုင်မှ ဒန်ပေါက်။ ဒါပေမယ့် မြနန္ဒာက ဒန်ပေါက် ထမင်းက အရောင်လေးပါတာ ကလွဲရင် ရိုးရိုးထမင်းနဲ့ သိပ်မကွာဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ အနှစ်မပါဘူး။ သွားစားတုန်းက ထည့်ပေးတာ အတော်လေး နည်းတယ်။ (တခါသာစားဖူးသည်) ကြက်သားက အထွေအထူးပြောလို့ ရအောင် မကောင်းသလို ၊ အရမ်းကြီးလည်း မဆိုးဘူး။ စားလို့ ဖြစ်တယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ စားဖူးသမျှ ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ မြန်မာဒန်ပေါက်တွေထဲမှာတော့ မြနန္ဒာက ဒန်ပေါက်ကို တတိယ အဆင့်အနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်။ရဲရင့်ဆိုင်မှ ဒန်ပေါက်။ ရဲရင့်က လူရှုပ်တော့ ကိုယ့်ဘာသာဆို လုံးဝ မသွားဖြစ်ဘူး။ TT နဲ့NG တို့ နဲ့ သွားမှသာလျှင် အဲဒီဆိုင်မှ စားဖြစ်တယ်။ ရဲရင့်က ဒန်ပေါက် မစားဖြစ်တာ အတော်လေးကို ကြာပြီ။ စားဖူးသလောက်တော့ မဆိုးဘူး။ ကျွန်မ စားလို့ ဖြစ်တယ်။ တစ်ပန်းကန်လုံး ကုန်တယ်။ အရင်က ဒန်ပေါက်စားချင်တယ်ဆို ရဲရင့်ကို ပထမ ဦးစားပေးအနေနဲ့သွားဖြစ်တယ်။ ဟိုး ၄-၅ လကျော်က ဒန်ပေါက်စားချင်လို့ရဲရင့်သွားတာ ကုန်သွားပြီတဲ့။ တနင်္ဂနွေနေ့နေ့ လယ် ၂ နာရီကျော်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းတော့ ရဲရင့်ကို နောက်ထပ် မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး။ဒန်ပေါက်အကြောင်း အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်၁။ မြနန္ဒာ - နည်းတယ်။ အရသာ မဆိုး၊ စားလို့ ဖြစ်တယ်။၂။ အင်းလေး - အရသာ မဆိုး။ မြန်မာဒန်ပေါက်နဲ့ သိပ်မတူ။ စားလို့ တော့ဖြစ်တယ်။၃။ Oriental House - များတယ်။ အရသာ မကြိုက်။၄။ ရနံ့ သစ် - စားဖူးသမျှ စင်္ကာပူက ဆိုင်တွေမှာ အနှစ်သက်ဆုံး။ (အခုချိန်ထိ)၅။ ရဲရင့် - အရင်က စားဖူသလောက် ကြိုက်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း မရောက်ဖြစ်တာကြာလို့အခြေအနေမသိ။၆။ ဧရာဝတီ - အဲဒီဆိုင်မှာ ဒန်ပေါက်ရလား၊ မရလား သေချာ မသိ။ မစားဖူးပါ။တခြား မြန်မာဆိုင်တွေ ရှိအုံးမယ် ထင်တယ်။ ကျွန်မ သိတာ ဒီလောက်ပဲ။ရနံ့ သစ်မှ ဒန်ပေါက်ထဲတွင် ၀ှက်ထားသော ကြက်သားကို ဖော်ပြီးနောက်....ရနံ့ သစ်ဆိုင်က မုန့် ဟင်းခါးလည်းမဆိုးဘူး။ စားလို့ အတော်လေး ကောင်းတယ်။ ၄-၅ ခါ လောက်စား ဖူးတယ်။ မှတ်မှတ်သားသားရှိတာက ၂ ခါမှ မုန့် ဟင်းခါးဖတ်က နည်းနည်းမာ နေတယ်။ မနေ့ က သွားစားတာကတော့ အဆင်ပြေတယ်။ ကျွန်မ ပတ်ဝန်းကျင်က လူအတော်များများကလည်း ရနံ့ သစ်က မုန့် ဟင်းခါး ကောင်းတယ် ပြောကြပါတယ်။ရနံ့ သစ် မှာ စားလို့ကောင်းတာတွေ ရှိသလို မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်။ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ကြာဇံကြော်၊ ထမင်းကြော်တို့ တော့ ယောင်လို့ တောင် မစားလေနဲ့လုံးဝ မကောင်းဘူး။ ထမင်းကြော်ကလည်း ပြောင်းဖူးအ၀ါတွေပဲ ပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်မှာ သာမန်ကြော်စားတဲ့ ထမင်းကြော်တောင် အဲဒီဆိုင်က ထမင်းကြော်ထက် အဆပေါင်း များစွာ ကောင်းတယ်။ ခေါက်ဆွဲကြော်လည်း ထိုနည်း လည်းကောင်းပဲ။ လုံးဝ မကောင်း။ Oriental House မှာလည်း ခေါက်ဆွဲကြော် မကောင်းဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ကြာဇံကြော် စားမယ်ဆို အင်းလေး ကပဲ ၀ယ်စားတော့တယ်။ ဈေးနည်းနည်းကြီးပေမယ့် စားလို့ ကောင်းတယ်။ဒီမှာ ရေးသားထားတဲ့ စားကောင်းခြင်း၊ မကောင်းခြင်းဟာ ကျွန်မ အစားအသောက်တွေ ၀ယ်စားတဲ့ အချိန်မှာ ခံစားလို့ ရလိုက်တဲ့ အရသာနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်လို့တခြားသူတွေ အမြင်နဲ့ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။
နှင်းဆီးပန်းပင်ကြီးPhoto Source အင်တာနက်ပေါ် လိုက်ရှာရင်တွေ့ တာ။ ရှာတာက အပင် မဟုတ်ဘူး။ အပွင့်၊ အဖူး တွေနဲ့အခိုင်လိုက်ဖြစ်နေတာမျိုး ရှာတာ။ အခု အပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို တွေပြီး အရမ်းသဘောကျသွားတယ်။ အပြင်မှာ တစ်ခါမှ အဲဒီလို အပင်ကြီးကြီးနဲ့အပွင့်ကြီးကြီးတွေ ပွင့်နေတာမျိုး မတွေ့ ဖူးဘူး။ အဖြူရောင်နဲ့ပန်းနုရောင် အပွင့်သေးလေးတွေ နဲ့ခြုံလို ဖြစ်နေတာမျိုးတော့ တွေ့ ဖူးတယ်။ ဒီလို အပင်ကြီး လိုချင်တယ်။ အခုအရောင် (ပန်းရောင်)ကို သိပ်မကြိုက်ဘူး။ တခြားအရောင်ဆို ပိုလှမယ် ထင်နေတယ်။ကိုယ့်ဘာသာ အပင်တွေစိုက်ဖို့စိတ်မရှည်ပေမယ့် သစ်ပင်တွေ အများကြီးနဲ့ပန်းတွေပွင့်၊ အသီးတွေသီးတာမျိုးဆိုရင် အရမ်း သဘောကျတယ်။ ရန်ကုန် အိမ်မှာ သစ်ပင်စိုက်ဝါသနာပါတဲ့အစ်ကိုက အလှပန်းပင်တွေ တင်မကဘူး၊ စားလို့ ရတဲ့ အပင်တွေပါ အစုံ စိုက်ထားတယ်။ငယ်ငယ်ကဆို အစ်ကိုစိုက်တဲ့ အပင်တွေကပွင့်တဲ့ ပန်းတွေယူပြီး မေမေ နဲ့ကျောင်းက ဆရာမတွေ ပန်ဖို့မျက်နှာလုပ် လက်ဆောင်ပေးနေကြ။
1/16/2009 02:05:00 PM
နေးတစ်မှာ မန်ဘာတစ်ယောက်က ရေးထားတယ်၊ ရန်ကုန်မှာ မရမ်းသီးပေါ်ပြီ တစ်ဆယ်သား ၈၀၀ တဲ့။ ပုဇွန်ဘော့ချိတ်ကလေးတွေ နဲ့ထောင်းစားတယ်ဆိုတော့ မရမ်းသီးအနုလေးတွေလား မသိဘူး။ အဲဒီအစ်မ ရေးထားတာ ဖတ်ပြီး မရမ်းသီးစားချင်တဲ့ စိတ်ပေါ်လာတယ်။မရမ်းသီးထောင်းတို့မရမ်းသီးသုတ်တို့ စားချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ မရမ်းသီးထောင်းတို့မရမ်းသီးသုတ်တို့စားလေ့မရှိဘူး။ မရမ်းသီး အစိမ်း အရင့်ကို ထက်ခြမ်းခွဲ ထားတာကို ဆား၊ သကြား ( တစ်ပုလင်းကို ဆေးသကြားတစ်ခဲ လောက်ထည့် လည်း ကောင်းတယ်၊ အမေ ခွင့်ပြုရင်ပေါ့ ) နဲ့စိမ်ပြီး နည်းနည်း ၀ါတာတာလေး ဖြစ်တဲ့ အချိန်ထုတ် ဆား၊ နွယ်ချို၊ ငရုတ်သီး နဲ့သကြား စပ်ထားတဲ့ အမှုန့် နဲ့ စားချင်တာ။ ဒါမှမဟုတ်၊ မရမ်းသီး အစိမ်းကို ဒီတိုင်း ပါးပါးလေးတွေ ဖြစ်အောင် လှီးပြီး ဆား၊၊နွယ်ချို၊ ငရုတ်သီးမှုန့်တွေထည့်ပြီး စပ်စပ်လေး နယ်စားချင်တယ်။Photo taken by Robin Thomမရမ်းသီးစိမ်း အရင့်တွေ ဈေးမှာ ရောင်းနေပြီဆိုတာနဲ့အိမ်က အမြဲဝယ်ပေးတယ်။ အိမ်ရှေ့ အိမ်မှာလည်း မရမ်းသီးပင်ကြီးရှိတော့ သူတို့ စီကလည်း အလကားရတယ်။ မရမ်းသီးတွေကို ထက်ခြမ်းခွဲပြီး စားဖို့ပုလင်းနဲ့စိမ်ထားတယ်။ တခါစိမ်ရင် ၂ ရက်လောက်စောင့်ပြီးမှ စားလို့ ရတယ်။ မရမ်းသီးခြမ်းတွေ အရောင်ပြောင်းပြီဆို စားလို့ ရပြီ။ အမြန်အရောင် ပြောင်းစေချင်ရင် အခြမ်းတွေကို ဆားရည် မြန်မြန် ၀င်အောင် ဓားနဲ့နည်းနည်း မွှမ်းပေးတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ရေနွေး နည်းနည်းထည့် လိုက်တယ်။ :D ပုလင်းနဲ့ စိမ်တဲ့အချိန်မှာ ထည့်တဲ့ ဆားသကြား အချိုးက အရေးကြီးတယ်။ နည်းသွားရင် ချဉ်နေပြီး များသွားရင်လည်း ချိုရဲကြီး ဖြစ်နေရော။ တခြားသူတွေ လုပ်ပေးရင် စိတ်တိုင်းမကျတာများလို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ လုပ်တယ်။ ကျွန်မ လုပ်ထားသမျှ မောင်လေးနဲ့ ညီမလေးက အားပေးတယ်။ အိမ်မှာဆို ကျွန်မတို့အငယ်သုံးယောက်လုံး အချဉ်စားတယ်။ အစ်ကို အကြီးဆုံးကတော့ မစားဘူး။ အမေကလည်း အချဉ်မစားဘူး၊ အဖေကတော့ တခါတလေ စိတ်ကူးပေါက်ရင် ကျွန်မတို့ စီက တောင်းယူစားတယ်။အပြင်မှာ အဲလို စိမ်ပြီး အထုတ်နဲ့ ရောင်းတဲ့ မရမ်းသီးတွေ မကြိုက်ဘူး။ သန့် တယ် မထင်ဘူး။ ပြီးတော့ ကိုယ်ဘာသာ လုပ်စားသလောက် အရသာမရှိဘူး။ ပျော့နေတာလဲ များတယ်။ အိမ်မှာ စိမ်ထားတဲ့ မရမ်းသီးခြမ်းတွေကို ပုလင်းထဲကနေ ဇွန်းနဲ့ ခပ်ယူစားရတယ်။ သန့် ရှင်းဖို့ လိုတယ်။ တစ်ပုလင်းကို ၃-၄ ရက်လောက်ပဲ ထားလို့ကောင်းတယ်။ နည်းနည်းကြာသွားရင် မရမ်းသီးခြမ်းတွေက ပျော့သွားရော။ အဲလို့ ပျော့သွားရင် ၀မ်းပျက်မှာစိုးလို့ ဆိုပြီး မစားရတော့ဘူး။ ပျော့တဲ့ဟာက စားလို့ လည်း မကောင်းဘူး၊ နည်းနည်း မာဆပ်ဆပ်လေးမှ စားကောင်းတာ။ ပျော့ပြီး ပစ်လိုက်ရတဲ့ အဆင့်မရောက်ပါဘူး။ မပျော့ခင် ကုန်တာပဲ။ မရမ်းအရင့် ပေါ်စကနေ အသီး မတုန်းမခြင်း အဲဒီလိုလုပ် စားတာပဲ။ အဲဒီ အချိန်တွေဆို ထမင်းလည်း မှန်မှန်စားဖြစ်တယ်။ အချဉ်တွေ ဒီအတိုင်း အများကြီး စားတယ်ဆိုရင် အစာအိမ်ရောဂါဖြစ်မှာစိုးလို့ ဆိုပြီး ထမင်းစားပြီးမှသာ စားခွင့်ပေးတယ်လေ။မရမ်းသီးဆိုလို့တစ်ခု ရှိသေးတယ်။ ကျွန်မ မရမ်းချိုသီး မကြိုက်ဘူး။ လုံးဝ မစားသလောက်ပဲ။ ချဉ်ရမယ့် နေရာလာပြီး ချိုနေတယ်။ အချိုစားချင်မှဖြင့် တခြားချိုတဲ့ အသီးတွေ သွားစားမှာပေါ့။ မရမ်းသီး မချဉ်တာထက်စာရင် မစပ်တဲ့ ငရုတ်သီးဆိုတာကို ပိုပြီး လက်ခံနိုင်တယ်။ ငရုတ်သီးက စပ်ရမယ့်နေရာ မစပ်တာက ဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်သင့်ပေမယ့် အစပ်ကြောက်ပြီး၊ ငရုတ်သီးအနံ့ကြိုက်သူတွေအတွက် အသုံဝင်သေးတယ်လို့ယူဆတယ်။သရက်သီးအကြောင်းရေးတဲ့ ပိုစ့်မှာ ဒီနိုင်ငံမှာလည်း မရမ်းသီး အစိမ်း ၀ယ်လို့ ရတယ် လို့တစ်ယောက်က လာပြောဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် မရမ်းသီးအစိမ်းက ရင့်ရင့်၊ အလုံးအကြီးကြီးတွေမှ စားလို့ကောင်းတာ။ မရမ်းသီးပေါ်တဲ့ အချိန်ရောက်ပြီဆို လူကြုံရှိတာနဲ့အမေက မရမ်းသီးစိမ်းတွေ ထည့်ပေးမှာ သေချာတယ်။ စောင့်လိုက်အုံးမယ်၊ ဘယ်တော့ စားရမလဲ မသိဘူး။ အိမ်က မရမ်းသီးပို့ ပေးတဲ့အခါမှ ပုံနှင့်တကွ ဒီမှာ မှတ်တမ်း တင်အုံးမယ်။ ငယ်တုန်း အချဉ်စား နိုင်တုန်း၊ စားခွင့်ရတုန်း စားရတာ၊ အသက်ကြီးလာရင် ဒီလိုအချဉ်အစပ်တွေကို စားချင်စိတ် ရှိချင်မှရှိတော့မှာ။ရေးထားတာဖတ်ပြီး သွားရည်တွေကျသွားလား၊ သွားတွေကြိမ်းသွားကြလား၊ ဘာဖြစ်သွားကြမလဲ မသိဘူး။ သည်းခံပါ။ အလုပ်လုပ်ရင်း ခေါင်းရှုပ်လာလို့စားချင်တာတွေ ရေးလိုက်တယ်။ ခုတလော ခေါင်းရှုပ် စရာတွေ ကြုံလာရင်၊ အပြောင်းအလဲအနေနဲ့အစားအသောက် အကြောင်းကိုပဲ စိတ်ဝင်စား၊ တွေးမိတယ်။ ရေးချင်တာတွေရေး ပြီး မလုပ်ချင်ပဲ လုပ်ရမယ့်ဟာတွေ ဆက်လုပ်လိုက်အုံးမယ်။
1/15/2009 06:53:00 PM
Photo Source Lullaby For A Stormy Night - Vienna Teng Little child,.... Be not afraidThe rain pounds harsh against the glassLike an unwanted strangerThere is no dangerI am here tonightLittle child,.... Be not afraidThough thunder explodesAnd lightning flashIlluminates your tearstained faceI am here tonightAnd someday you'll knowThat nature is soThis same rain that draws you near meFalls on rivers and landAnd forests and sandMakes the beautiful world that you seeIn the morningLittle child,.... Be not afraidThe storm clouds mask your beloved moonAnd its candlelight beamsStill keep pleasant dreamsI am here tonightLittle child,.... Be not afraidThe wind makes creatures of our treesAnd the branches to handsThey're not real, understandAnd I am here tonightAnd someday you'll knowThat nature is soThis same rain that draws you near meFalls on rivers and landAnd forest and sandMakes the beautiful world that you seeIn the morningFor you know, once even IWasalittle childAnd I was afraidButagentle someone always cameTo dry all my tearsTrade sweet sleep for fearsAnd to giveakiss goodnightWell, now I am grownAnd these days have shownRain'sapart of how life goesBut it's dark and it's lateSo I'll hold you and wait'til your frightened eyes do closeAnd I hope that you'll knowThat nature is soThis same rain that draws you near meFalls on rivers and landAnd forests and sandMakes the beautiful world that you seeIn the morningEverything's fine in the morningThe rain will be gone in the morningBut I'll still be here in the morning
1/15/2009 02:01:00 PM
ဒီနေ့ ညစာ အဖြစ် Fried Oyster Omelette (Orh Luak) နဲ့ထမင်း တစ်လုံးနဲ့စားဖြစ်တယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ စားဖူးသမျှ Oyster နဲ့ ကြက်ဥကြော်တွေထဲမှာ ဒီနေ့ စားတဲ့ဆိုင်က ဟာကို အတော်လေး ကြိုက်တယ်။ အရမ်း မအီဘူး။ စားလို့ ကောင်းတယ်။ညနေဆိုတော့အလင်းရောင် သိပ်မရလို့ ပုံက နည်းနည်းမှောင်နေသလိုပဲ။ စင်္ကာပူမှာ ရောင်းတာ Fried Oyster Omelette နှစ်မျိုး ရှိတယ်။ တစ်မျိုးက ကြက်ဥ၊ Oyster နဲ့ ကော်မှုန့် ( ထင်တာပဲ ) ကို ခေါက်ပြီး အကြေပုံစံမျိုး ကြော်ထားတာ။ နောက်တစ်မျိုးက ရိုးရိုး ကြက်ဥခေါက်ကြော် အပြင်လိုက်ပေါ်မှာ Oyster တွေ တင်ပေးထားတာ။ ဒုတိယ အမျိုးအစားမှာ ပါတဲ့ Oyster က ပိုပြီး ကြီးတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ပထမ အမျိုးအစားကို ပိုကြိုက်တယ်။ ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်စားတဲ့အခါ Oyster မကြိုက်ဘူးဆို ပုဇွန်နဲ့မှာလို့ ရတယ်။ ပုဇွန်နဲ့ တစ်ခါ စားဖူးတယ်။ ပုံမှန်ဆို Oysterုမကြိုက်ပေမယ့် အဲလို ကြက်ဥနဲ့ ကြော်တာမှာတော့ ပုဇွန်ထက်စာရင် Oyster နဲ့ ကြော်တာက ပိုပြီးစားကောင်းတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဒီပုံ နည်းနည်းဝါးသွားတယ်ဘယ်လိုကြော်ရလည်း သိချင်တယ်ဆို Google မှာ Fried Oyster Omelette Recipes ဆိုပြီး ရှာကြည့် လိုက်ပါ။ ကြော်ရတာ မြန်လည်းမြန် လွယ်လည်းလွယ်မယ်။ အထင်ပြောတာပါ။ ခုချိန်ထိ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တခါမှ ကြော်မစား ကြည့်ဖူးသေးဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်တော့ ကြော်ကြည့်ဖြစ်လောက်တယ်။My Food Albumဒီနေ့အလုပ်မှာ Deployment ရှိတယ်။ အခုအချိန်အထိ အိမ်မပြန်ရသေးဘူး။ ကိုယ့်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေပြီးပြီ။ တခြားသူတွေကို စောင့်ရင်း အချိန်ဖြုန်းတဲ့ အနေနဲ့ညနေခင်းက စားဖြစ်တဲ့ ညစာအကြောင်း အခုလို မှတ်တမ်းတင်ဖြစ် သွားပါတယ်။Pleace to eat Fried Oyster Omelette - GoodFood(SG)
အစကနင်းထားရတာ မြေကြီဆိုအဆုံးတော့မော့ကြည့်ရတာလည်း မြေကြီးပဲဒီမြေကြီးပေါ်မှာမှတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မဝေမျှနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒီညငါ့အိပ်ရာကလေးကို ငါစီပို့ ပေးကြ။မြေကြွက်တစ်ကောင်လိုကြုံရာတွင်းမှာ မအောင်းချင်ဘူး.ငါ့ဝိညာဉ်ကိုဓာတ်တိုင်ထိပ်မှာ မချိတ်နိုင်ဘူး။ငန်းဖမ်းနေတဲ့ "ဂျစ်ပစီ" ဟာငါ မဟုတ်ဘူး။မထူးတော့တဲ့ ဒီညအာဖရိက ခြင်္သေ့တစ်ကောင်လို အော်ဟစ်ပြီးကမ္ဘာကြီးကို ကုတ်ခြစ်ပစ်ချင်ရဲ့။ဒီညငါ့အိပ်ရာကလေးကို ငါစီပို့ ပေးကြ။လူ့ ဘ၀မှာ ကြယ်တွေလတွေ မစုံပေမယ့်မိုးလုံလေလုံ အိပ်ရာကလေးတော့ လိုအပ်တယ်။"မေမေရေ"သော့ခတ်ထားတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်အိပ်ရာပျောက်ညတဲ့ညများ များပေါ့။ဒီညငါ့အိပ်ရာကလေးကို ငါစီပို့ ပေးကြ။စက်ဝိုင်းထဲညတိုင်းတော့တိုးနေရတဲ့ ဒီည။တရားထူးရခဲ့ရင်အရင်ဦးဆုံး ဟောကြားလှည့်ပါ "အရှင်"။မြေကြီးကို ခင်တွယ်ခဲ့သမျှမြေကြီးကို ပစ်ချခဲ့တဲ့ ဒီညဒီညငါ့အိပ်ရာကလေးကို ငါစီပို့ ပေးကြ။ ။မိုဃ်းဇော်
1/14/2009 02:19:00 PM
NSA (National Security Agency) ၊ DHS (U.S. Department of Homeland Security) ၊ Microsoft ၊ Symantec စသည်ဖြင့် US က high-profile organizations ကြီး အခု ၃၀ တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဒီနေ့ ပဲ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ 25 most dangerous coding errors list ဖြစ်ပါတယ်။ Hacker တွေက အဲဒီ Programming error တွေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး attack လုပ်ကြတယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ ဒီ Error 25 ချက်ကို Programmer တွေ မဖြစ်မနေ လေ့လာသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။* Category: Insecure Interaction Between Components (9 errors)* Category: Risky Resource Management (9 errors)* Category: Porous Defenses (7 errors)CATEGORY: Insecure Interaction Between ComponentsCWE-20: Improper Input Validation CWE-116: Improper Encoding or Escaping of Output CWE-89: Failure to Preserve SQL Query Structure (aka 'SQL Injection') CWE-79: Failure to Preserve Web Page Structure (aka 'Cross-site Scripting') CWE-78: Failure to Preserve OS Command Structure (aka 'OS Command Injection') CWE-319: Cleartext Transmission of Sensitive Information CWE-352: Cross-Site Request Forgery (CSRF) CWE-362: Race Condition CWE-209: Error Message Information Leak CATEGORY: Risky Resource ManagementCWE-119: Failure to Constrain Operations within the Bounds ofaMemory Buffer CWE-642: External Control of Critical State Data CWE-73: External Control of File Name or Path CWE-426: Untrusted Search Path CWE-94: Failure to Control Generation of Code (aka 'Code Injection') CWE-494: Download of Code Without Integrity Check CWE-404: Improper Resource Shutdown or Release CWE-665: Improper Initialization CWE-682: Incorrect CalculatioCATEGORY: Porous DefensesCWE-285: Improper Access Control (Authorization) CWE-327: Use ofaBroken or Risky Cryptographic Algorithm CWE-259: Hard-Coded Password CWE-732: Insecure Permission Assignment for Critical Resource CWE-330: Use of Insufficiently Random Values CWE-250: Execution with Unnecessary Privileges CWE-602: Client-Side Enforcement of Server-Side Securityအဲဒီ Errors တွေကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပြီး တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်တွေ ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။SAM : 2009 CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Programming ErrorsCWE : 2009 CWE/SANS Top 25 Most Dangerous Programming ErrorsCredit to ****
1/12/2009 11:35:00 PM
ပုံမှန်အတိုင်းဆို Ubuntu မှာ Adiminstration [root] account နဲ့ဝင်လို့ မရပါဘူး။ Root User ကို ပိတ်ထားပေမယ့် Account က ရှိနေတဲ့ အတွက် Root User နဲ့Login ၀င်ပြီး အသုံးပြုချင်တယ်ဆို ရအောင်လုပ်ဖို့ နည်းလမ်း ရှိပါတယ်။၁။ Root user အတွက် Password သတ်မှတ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။Terminal ကိုသွား sudo passwd root ဆိုတာကို ရိုက်ထည့်ပြီး root user အတွက် password ကို သတ်မှတ်ပေးလို့ ရပါတယ်။၂။ Root User login ကို ဖွင့်ပေးရပါမယ်။System -->Administration-->Login Window ကိုသွားပါ။Password ထည့်ခိုင်းတဲ့အခါ လက်ရှိ ၀င်ထားတဲ့ user ရဲ့ passowrd ကိုထည့်ပေးပါ။ Pop-up window တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ "Security" tab ကိုသွားပါ။"Allow local system administrator login". ဆိုတဲ့ checkbox ကို ရွေးပြီး အဲဒီ Widnow ကို ပိတ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် Ubuntu ကို root user နဲ့login လုပ် သုံးနိုင်ပါပြီ။ password အမြဲတမ်း ရိုက်ထည့်နေရတာကို နှစ်သက်ခြင်း မရှိ၊ အလုပ်ရှုပ်တယ် ထင်တဲ့အတွက် Ubuntu သုံးတဲ့အခါတိုင်းမှာ root အကောင့်နဲ့ ပဲ သုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့တခြား Security အရေးတွေကို သိပ်ပြီး ဂရုစိုက်စရာမှ မလိုတာ။ ဒါနဲ့Root Account ကို သုံးခြင်းရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်နဲ့မကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို သိချင်တယ်ဆို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။Root User အတွက် Password သတ်မှတ်ရာမှာ နောက်တစ်နည်းက System--> Administration -->Users and Groups ကိုသွားပြီး သတ်မှတ်လို့ လည်းရပါတယ်။ အဲဒီမှာ root account က lock ဖြစ်နေရင် unlock အရင်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီနောက် "root" အပေါ်မှာ Double-click နှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ Window ထဲက "Set password by hand" ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်သတ်မှတ်ချင်တဲ့ Password ကို ထည့်လို့ ရပါတယ်။
1/11/2009 02:40:00 AM
အမည်မဖော်လိုသူ တစ်ယောက်က ကွန်မန့် ကနေ Google Favicon ပြောင်းသွားတာ သတိထားမိလား မေးတယ်။ Google Blog မှာ အဲဒီသတင်း တက်လာတာ တွေ့ လို့ကြည့်နေတာ။ တွေ့ တွေ့ ခြင်း Firefox ကိုသုံး သွားကြည့်တော့ မပြောင်းသေးဘူး။ မအိပ်ချင်သေးတာနဲ့သတင်းတွေ လိုက်ဖတ်ရင်း တချက်တချက် ဂူးဂဲလ်သွားပြီး ဘယ်တော့ ပြောင်းမလဲဆို သတိထား ကြည့်နေမိတယ်။ အခုလေးတင် သတိရလိုက်လို့ Firefox တင်မကဘူး တခြား Browser တွေကိုပါ သုံးပြီး google.com သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ တချို့Browser တွေမှာ ပြောင်းပြီးပေါ်နေပြီဆိုတာ တွေ့ လိုက်ရတယ်။အသစ်က အရောင်စုံလေး။ ဂူးဂဲလ် အရောင် အပြာ၊အနီ၊အ၀ါ၊အစိမ်း နဲ့အဖြူရောင် ကိုသုံးထားတယ်။ စာလုံးက g အသေးပဲ။ မပြောင်းတဲ့ Firefox နဲ့IE ကို ဟိုးရှင်းဒီရှင်းလုပ်ပြီး ပြောင်းမလား စမ်းကြည့်တာ မရတာနဲ့ထားလိုက်တော့တယ်။ တစ်ချိန် ပြောင်းလိမ့်မယ်။ Photo Source Other related post : Google's New Blue Favicon
1/10/2009 04:25:00 AM
အတင်းလား သတင်းလား...ဘာလဲ......မပြောတတ်တော့ အတင်း..ပြောတတ်ရင် သတင်း ဖြစ်တယ်။..............☺
မနေ့ ညက စာဖတ်ရင်း ကွန်ပြူတာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ eB00k တွေကို လျှောက်ကြည့် ဖြစ်တယ်။ သိတဲ့ အတိုင်းပဲ စာကြည့်မယ်ဆို ဖတ်မယ် စိတ်ကူးတဲ့ စာအုပ်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ အရာအားလုံးဟာ စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တယ်။ ဒီစာအုပ်တွေ ဒေါင်းလုတ်လုပ် စုထားတာ မနှစ်က နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်က တည်းက။ အတော်ကြာနေပြီ။ အလုပ်က သူငယ်ချင်း တချို့စာမေးပွဲဖြေ ကြလို့သူတို့ အတွက် စာအုပ်တချို့ လိုက်ရှာပေးဖြစ်ခဲ့တာ။ကျွန်မကတော့ အီးဘုတ်တွေ ဖတ်ရတာ ထက်စာရင် စာအုပ်ဖတ်ရတာ ပိုအားသန်တယ်။ DL DL DL DLဒါကတော့ Java6အတွက် စာအုပ်။ သိသမျှ သူငယ်ချင်း အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ အခုအချိန်အထိ Java6ဖြေတဲ့သူ တစ်ယောက်မှမရှိသေးဘူး။ DLဒီအောက်က စာအုပ်ကတော့ SCWCD (CX-310-081) အတွက် စာအုပ်။ DL DL ခုနောက်ပိုင်းတော့ Java နဲ့ပတ်သက်တာ နည်းနည်း ပြန်ဖတ်မလား စိတ်ကူးနေတယ်။ အလုပ်လည်း အသစ်ထပ်ရှာဖို့ လည်း စိတ်ကူးရှိတယ် ဆိုတော့ အင်တာဗျူးတွေအတွက် ပြင်ဆင်ရင်း တစ်ခါတည်း Java Ceftificate တွေအတွက်ပါ ဖတ်ရင်ကောင်းမယ်။ တစ်ချက်ခုတ်ယုံနဲ့နှစ်ချက်များ ပြတ်မလား။J2ME ကို မသိတော့ SCMAD ကိုလည်း ဖြေဖို့စိတ်ကူးကို မရှိဘူး။ J2SE (SCJD) ကိုတော့ မဖြေတော့ဘူး စိတ်ကူးတယ်။ အခုလက်ရှိ လုပ်နေတာက J2EE နဲ့ဆိုင်တော့ အလုပ်နဲ ဆိုင်တဲ့ SCWCD နဲ့SCBCD ဘာဖြေရင် ကောင်းမလဲ။ တကယ်ဆို အဲလို စဉ်းစားတာ ၂-၃ နှစ်ရှိပြီ။ ကောင်အထည်သာ မဖော်ဖြစ်တာ။ ချစ်သူကတော့ အားပေးတယ်။ အားနေတာပဲ နှစ်ခုလုံး ဖြေလိုက်တဲ့။ ကျွန်မ သိပ်အားနေတာ သူ မကြည့်ရက်ဖူးထင်ပါတယ်။ မအားဘူးပြီး ဆင်ခြေတတ်လို့ လည်းမရ။ ကျွန်မ ဘာမှ မလုပ်ပဲ၊ အချိန်ယူတတ်ရင် လုပ်လို့ ရနိုင်တာ သူသိနေတာပဲ။ ခုတော့ စားမေးပွဲဖြေဖို့ ဆိုတဲ့ စကာသံကြားရင် နည်းနည်း ဝေးဝေးပုန်းချင်နေတယ်။ ဘယ်တော့ ဖြေမှာလဲ ဘာတွေ ဖြေမှာလဲ မမေးနဲ့ဖြေဖြစ်မှာ တကယ်ဖြစ်မယ်။ အားတင်း နေပါတယ်။eBooks source from Internet and all credit goes to original uploader!!အရှေ့ က စာမေးပွဲတစ်ခါ ဖြေခဲ့တုန်းက အစစအရာရာ အဆင်ပြေပြေ လေ့လာနိုင်အောင် စာအုပ်ဝယ် လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် နဲ့သူစီမှာရှိသမျှ သူပြင်ဆင်ထားသမျှ မချွင်းမချန် အကုန် ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းယောက်ကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ :-)
1/09/2009 10:20:00 AM
မြောက်ပိုင်းတရုတ်ပြည်က အစားအသောက်။ ဒီစားသောက်ဆိုင်က ဖွင့်တာ သိပ်မကြာသေးဘူး။ ကျွန်မတို့ သွားစားလေ့ရှိတဲ့ Chiew Kee Chicken Noodle House ဆိုင်နားမှာ။ ဟိုတစ်ရက် Chicken Rice သွားစားရင် ဒီဆိုင်လေးကို သတိထားမိတယ်။ ကျွန်မတို့ ထဲက ဖိလစ်ပီးနိုး တစ်ယောက်က မြောက်ပိုင်း တရုတ်ပြည်မှာ တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့တာဆိုတော့ အဲဒီကအစားအသောက်တွေနဲ့ ရင်းနှီးတယ်။ အပြင်မှာ ကပ်ထားတဲ့ အစားအသောက်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး ဒါ မြောက်ပိုင်းက အစာတွေ၊ အရာသာရှိမယ့်ပုံပဲ စားချင်တယ် ဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ သွားစားဖြစ်တယ်။ဆိုင်နာမည်ကို တရုတ်လို ရေးထားပြီး၊ ဆိုင်ပြင်မှာတော့ အစားအသောက်ပုံတွေကပ်ထားတာ တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားတယ်။ ဆိုင်ရှင်ကလည်း တရုတ်လိုပဲ ပြောတယ်။ အထဲမှာ ချပေးတဲ့ မီနူးမှာလည်း တရုတ်လိုပဲပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို မီနူးမရှိဘူးလားဆိုတော့ ပုံနဲ့ တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးပြတယ်။ တစ်ဆိုင်လုံးမှာ အင်္ဂလိပ်လို ပုံနဲ့ မီနူးက တစ်ခုပဲရှိတော့ တခြားဝိုင်းက တရုတ်စာ မဖတ်တတ်သူတွေ လာမယ်ဆို ပေးလိုက်ရမယ်။ အဆင်သိပ်မပြေဘူး။အဲဒီမှာသွားစားမယ်ဆို အနည်းဆုံး ၄ ယောက်လောက်သွားစားမှ ကောင်းတယ်။ ဟင်းပွဲတွေက ထည့်ပေးတာများတယ်။ ရှယ်ယာ လုပ်စားတာမျိုးပေါ့။ ဈေးတွေက ဟင်းတစ်ပွဲကို ၈-၁၀ ကြားရှိတယ်။ ခေါက်ဆွဲတွေ ဘာတွေကတော့ ၆ ဒေါ်လာ လောက်ပဲရှိမယ်။ ဖက်ထုတ်တွေလည်း ရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းမှာပေးတဲ့ အစားအသောက်တွေက စားလို့ ကောင်းတယ်။ အရသာ အတော်ရှိတယ်။ ကျွန်မ စားလို့ ရတယ်ပေါ့။ အခု ၃ မျိုးစားခဲ့တယ်။ ထမင်းကတော့ တစ်ယောက် တစ်လုံးစီ။ တစ်ယောက်ကို S$5.0 ကုန်တယ်။ အအေးတစ်ဘူးက S$1.20 ဆိုတော့ ဒီနေ့နေ့ လယ်စာ S$6.20 ကုန်ခဲ့တယ်။ နောက်ရက်တွေမှာလည်း ထပ်သွားစားအုံးမယ်လို့စိတ်ကူးထားကြတယ်။My Lunch Albumဒီနေ့ သွားစားတဲ့အထဲ အကြိုက်ဆုံးက ဒီအောက်ကဟာ။ ပထမဆုံးစားဖူးတာပါ။ ခေါက်ဆွဲလိုပဲ။ ခေါက်ဆွဲတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကြည်ကြည်လေးတွေ၊ ကြော်ထားတာ စားလို့ အတော်လေး ကောင်းတယ်။ လုံးဝ မအီဘူး။ ဘာလဲဆိုတာ ရှင်းပြတယ်။ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အရေးကြီးတာ စားလို့ ကောင်းဖို့ ပဲ။ဒီနေ့မြောက်ပိုင်း တရုတ်နဲ့တောင်ပိုင်း တရုတ်တွေ အစားအသောက်၊လူနေမှု့ ကွာခြားချက် အတော်များများ သိခဲ့ရတယ်။ တခြားတရုတ်တွေ အကြောင်းလည်း ပါတာပေါ့။ အင်း... သူငယ်ချင်းတွေ ပြောပြလို့တရုတ်မလေးတွေ အကြောင်းလည်း သိခဲ့ရသေးတယ်။